🐬I-Turquoise Dolphin Open Waterfront Retreat w/kayak, amabhayisikili! - I-Airbnb
🐬I-Turquoise Dolphin Open Waterfront Retreat w/kayak, amabhayisikili!
Matlacha, Florida, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Brhett
U-Brhett Ungumbungazi ovelele
Leli khaya likuMatlacha Pass! Jabulela ukubukwa okuhle kweMatlacha Pass futhi ubukele amahlengethwa edlala cishe kuwo wonke amagumbi akuleli khaya. Ikhishi elisebenza njengehabhu elimaphakathi lekhaya elingathandwa yinoma yimuphi umpheki! Uphahla oludaluliwe olusemgodini kanye nehhovisi elinamafasitela lengeza umlingiswa omuhle kuleli khaya elibanzi. Igumbi lokulala eliphakeme libheke umsele futhi lifaka i-walk in closet enamakhabethe akhiwe ngokwezifiso. Jabulela ukubuka ukushona kwelanga kweMatlacha ngeMango Daiquiri esihlahleni sakho sikamango!
Ukufinyelela ezindaweni zokuwasha, i-gas grill kuvulandi kanye nekhishi lesimanje elivulekile
Ikhaya lisemgwaqweni ongasekho ngaphandle kwethrafikhi. Omakhelwane banobungane ngokwedlulele futhi iyindawo ethulile.
UBrhett Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Matlacha namaphethelo